Mota Inoraswa Inodzivirira Cover, Auto Paint Masking Firimu - Aosheng
A Mashoko Mashoma Nezvedu
Aosheng inyanzvi yekugadzira inoraswa pendi yekuvhara zvigadzirwa. Iyo kambani inovakwa mugore ra2008 uye ine anopfuura makore gumi echiitiko.
Iyo fekitori ine ISO 9001, BSCI, FSC, Chitupa chePatent, Chitupa cheEnharaunda Impact Ongororo, Chitupa cheMoto Kuchengetedza nevamwe. Zvese zviri pamusoro zvinoratidza kuti Aosheng Fekitori inokwanisa kushandira pamwe newe.
Isu taizopa hunyanzvi uye hupfumi chigadzirwa icho Chinoita kuti pendi yako ishande nyore uye nyore. Kunze kwechinyakare chinhu, Aosheng zvakare kubhadhara zvakanyanya kutarisisa chitsva uye chakasiyana chigadzirwa kumutengi.
Anofema Masking Firimu
Anofema Masking Firimu inonyanya kushandiswa kuchengetedza iyo isina kupenda chikamu panguva yekupenda mota Iyi mota pendi inofema masking firimu yaigona kuita kuti mota yemuviri iome mushure mekupisa kupisa. Yakajairwa masking firimu haina mweya unofema uye muviri wemota unonyorova mushure mekushisa kwakanyanya. Ichi chigadzirwa chitsva chinoshandiswa kugadzirisa dambudziko rakadai. Iyo ficha ndeye 100% HDPE masking firimu, ine mhando yakanaka uye yakasimba. Iyo mukobvu kupfuura yakajairwa masking firimu uye nyore kucheka.
3 mu1 Yakagadzirwa Masking Firimu
3 mu1 pretaking masking film inonyanya kushandiswa kuchengetedza iyo isina kupenda chikamu panguva yekupenda kwemota. Iyi mota pendi yekufukidzira firimu ndeyekusarura chikamu uye yakazara mota muviri kupenda. Izvo zvigadzirwa zvedu zvechinyakare uye zvakakurumbira. Yakagadzirwa nezvikamu zvitatu: Masking tepi + Kraft bepa / Plastiki Pepa + Plastiki firimu.
Plastiki Pepa Rakamira yeMota Paint Masking
Mapepa epurasitiki mupumburu wakasanganisa zvakanakira Pe epurasitiki firimu uye bepa. Iko kwekuvhara kwakasarudzika, senge hwindo, mwenje uye girazi, kana muviri wese uchipenda. Izvo zvinhu zvinonyanya kuve PE epurasitiki, iyo yaizodzivirira kubva kune osmosis panguva yekupenda. Mapepa epurasitiki mupumburu zvakare ane maviri mativi corona kurapwa.
Yakagadzirwa yePurasitiki Pepa re Auto Paint Masking
Mapepa epurasitiki akafuridzirwa akabatanidza zvakanakira pe epurasitiki firimu uye bepa. Iko kwekuvhara kwakasarudzika, senge hwindo, mwenje uye girazi, kana muviri wese uchipenda. Izvo zvinhu zvinonyanya kuve PE epurasitiki, iyo yaizodzivirira kubva kune osmosis panguva yekupenda. Pepa repurasitiki rakagadzirwa zvakare rine maviri mativi ekorona kurapwa. Rimwe divi raigona kutora muviri wemotokari, uye rimwe divi raigona kutora pendi kubva pakudonha.
Magasi epurasitiki anoraswa anoshandiswa kuchengetedza ruoko rwako kubva pakushatiswa. Iyo PE epurasitiki zvinhu uye zvekusati kwekurapa kushandiswa. Magirafu anoraswa anogona kushandiswa zvakanyanya mukubika, kudya chikafu nemaoko, kubata chimwe chinhu chingasvibisa ruoko rwako. Izvo zvakare zvakanaka zvakasarudzwa kubata mumwe nemumwe kana iri novel coronavirus.
Magasi epurasitiki anoraswa anoshandiswa kudzivirira mbatya dzako kubva kumarudzi mazhinji ekushatiswa. Iyo PE epurasitiki zvinhu. Epuroni inoraswa inogona kushandiswa zvakanyanya mukubika, kudya chikafu, kubata chimwe chinhu chingasvibisa hembe dzako. Izvo zvakare zvakanaka zvakasarudzwa kubata mumwe nemumwe kana iri novel coronavirus. Sekuraswa kwechigadzirwa, yakachena, iri nyore uye ine hupfumi. Zvakare, epurasitiki inoraswa inogona kuve yakapetwa kuita saizi ruoko kuti zvive nyore kutakura nekushandisa.
Yakakurumbira Overspray Masking Firimu
Yakakurumbira Overspray Masking Firimu inowanzo shandiswa kuchengetedza iyo isina pendi chikamu panguva yekuita kwekupenda mota. Iyi mota pendi yekufukidzira firimu ndeyeye muviri wese chifukidzo uye chikamu kupenda. Izvo zvigadzirwa zvedu zvechinyakare uye zvakakurumbira. Iyo ficha ndeye 100% HDPE masking firimu, ine mhando yakanaka uye yakasimba. Overspray masking firimu yakawanda-yakapetwa kusvika pahukuru hwakakodzera kuitira kuti zvive nyore kutakura nekushanda.
Yakagadzirwa masking firimu inonyanya kushandiswa kuchengetedza iyo isina kupenda chikamu panguva yekuita kwemota kupenda. Iyi mota pendi yekufukidzira firimu ndeyekusarura chikamu uye yakazara mota muviri kupenda. Izvo zvigadzirwa zvedu zvechinyakare uye zvakakurumbira. Izvo zvinhu i100% HDPE yekuvhara firimu uye yakasungirirwa masking tepi. Yakagadzirwa masking firimu yakawanda-yakapetwa kusvika kumaoko size kuti ive nyore kushandisa. Iyo masking firimu ine corona kurapwa, iyo inogona kupinza iyo pendi uye kudzivirira kubva kune auto pamusoro pechipiri kusvibiswa.
Mota yekuchenesa set inosanganisira zvimwe zvinoraswa zvigubhu zvemota, senge chivharo chinogadziriswa chevhiri, vhiri remarara rinoraswa, chivharo chinogadziriswa chegiya, chivharo chebhureki rekurasa ruoko, chivharo chemarara, kurasa kiyi bhegi uye magurovhosi anoraswa. Mutengi anogona kuisa zvimwe zvinofukidzwa zvifukidzwe muhombodo imwe inokwana kushandisa nguva imwe chete. Zvinhu zvavo zvinonyanya kuve PE epurasitiki uye bepa.
Chivharo chepurasitiki chepurasitiki chinogona kupa dziviriro yakakwana kune rako tireyi. Iyo haigone chete kuchengetedza tai rakachena uye rakashambidzika, asi zvakare kudzivirira iro vhiri kuti risakwikwidzwe kana kusvibiswa. Yakagadzirwa neEP epurasitiki zvinhu izvo zvine simba uye hazvisi nyore kuputswa. Yese huremu hwakareruka uye nyore kuchengeta kana kutakura. Saizi yekupeta diki inoita kuti zvive nyore kuchengetera mumota kana kumba usingashandise nzvimbo yakawandisa.
Donhwe jira rinonyanya kushandiswa kuchengetedza iyo isina kupenda chikamu panguva yekuvaka yekupenda kana yekuchengetedza, kunyanya yakanakira kuvhara fanicha. Iyo ndeyeye multifunctional epurasitiki inodzivirira firimu. Jira rekudonha rinogona kuve rakanakira kushandiswa kwemukati. Izvo zvigadzirwa zvedu zvechinyakare uye zvakakurumbira. Izvo zvinhu ndeye HDPE masking firimu.
LDPE gobvu rekuvaka firimu, inonziwo LDPE gobvu rekuvaka firimu, rinonyanya kushandiswa kuchengetedza iyo isina kupenda chikamu panguva yekuvaka pendi. Iyo masking firimu inogona kuve yakakodzera kune ese epamba uye ekunze kushandiswa. Izvo zvigadzirwa zvedu zvechinyakare uye zvakakurumbira. Izvo zvinhu zvinogona kuve nyowani LDPE kana zvishandiswezve LDPE, inova yakawanda iri gobvu kupfuura yakajairwa masking firimu.
Yakakosha Shape Bhegi
Yakakosha chimiro bhegi inoshandiswa kudzivirira kubva mukusvibiswa. Semuenzaniso, Garment Suit Bag inoshandiswa kuchengetedza nguvo kubva mukusvibiswa, Sofa Bhegi rinoshandiswa kuchengetedza sofa kubva mukushatiswa, Bhagi rekugezera rinoshandiswa kuchengetedza muviri wako kubva mukusvibiswa, zvichingodaro. Yedu yakakosha chimiro bhegi iri mukutsigira yetsika yakagadzirwa, asi ita shuwa kuti iri PE epurasitiki zvinhu. Izvo ndezve multifunctional epurasitiki inodzivirira bhegi.